Imibuzo evame ukubuzwa - Chuzhou Meiko Magnetics Co., Ltd.
Hlobo luni lwemikhiqizo kazibuthe esingayithola kwaMeiko Magnetics?
Meiko Magneticskuyinto professional futhi ehamba phambili kazibuthe imikhiqizo umakhi & isithekelisi e China. Imikhiqizo yethu isukela kumazibuthe we-neodymium agqamile kuya emihlanganweni kazibuthe ehlobene ngezimo ezahlukahlukene, imisebenzi nezinhlelo zokusebenza. Izinhlobo ezingaphezu kuka-2000 zezinto kazibuthe ziyakhethwa.
Kunjani ngekhwalithi yakho kazibuthe?
Silwela ukunikela ngemikhiqizo kazibuthe efanelekile nge ISIQINISEKISO SONYAKA OWODWA, ngaphandle kwanoma yimuphi umonakalo wokufakelwa nokonakala. Siqinisekisa izinto zethu nokusebenza. Ukuzibophezela kwethu kukwaneliseka ngezinto zethu zamagnetic. Kwiwaranti noma cha, kuyisiko lenkampani yethu ukubhekana nokuxazulula zonke izingqinamba zamakhasimende ezenelisa wonke umuntu.
Izintengo zethu zingashintsha ngokuya ngokunikezwa nezinye izinto zemakethe. Kepha njengoba sisuselwe kumenzi kazibuthe womenzi oseChina, singanikela ngentengo yokuncintisana yokonga izindleko zakho.
Yebo, sidinga yonke imiyalo yamazwe omhlaba ukuthi ibe nenani le-oda elincane eliqhubekayo. Kepha uma izinto zosayizi ojwayelekile zisesitokweni, ayikho i-MOQ ye-oda lokuqala. Ngemininingwane engaphezulu, sicela usisize ukuxhumana nathi.
Yebo, singanikeza ngemibhalo eminingi kufaka phakathi Umbiko Wokuhlola, Izitifiketi Zokuhlaziywa / Ukuvumelana, Umshuwalense, Umsuka, neminye imibhalo yokuthekelisa edingekayo.
Imvamisa ezinsukwini eziyi-7-15 zokuthunyelwa. Uma ezintweni ezijwayelekile, singakuletha ezinsukwini ezi-3. Amasampula amasha, isikhathi phambili cishe izinsuku ezingu-7. Ukuze ukukhiqizwa ngobuningi, isikhathi phambili izinsuku 20-30 ngemuva kokuthola inkokhelo idiphozi. Izikhathi zokuhola ziqala ukusebenza lapho (1) sesitholile idiphozi yakho, futhi (2) sinemvume yakho yokugcina yemikhiqizo yakho. Uma izikhathi zethu zokuhola zingasebenzi nomnqamulajuqu wakho, sicela udlule izidingo zakho ngokuthengisa kwakho. Kuzo zonke izimo sizozama ukwamukela izidingo zakho. Ezimweni eziningi siyakwazi ukwenza njalo.